Isifo senhliziyo asitholakali kalula njengoba nokucindezeleka kwabesifazane - Izindaba Rule
Isifo senhliziyo asitholakali kalula njengoba nokucindezeleka kwabesifazane
Makhulu amathuba okuba abesifazane ukuba bafe yinhliziyo ngoba ngokuvamile izimpawu zabo asitholakali kalula nokukhathazeka ukuze abazi uthole ukwelashwa asheshe ezibalulekile, wathi ucwaningo ngoMsombuluko.
Abacwaningi at waseMcGill University Montreal esethwe ukuqonda umehluko ubulili e lokushona kwabantwana bezalwa kwabesilisa nabesifazane nge sibi syndrome senhliziyo.
babuza 1,123 ezigulini ezineminyaka 18 ukuze 55 ugcwalise inhlolovo ngemuva kokungeniswa omunye 24 izibhedlela eCanada, eyodwa e-United States nowodwa Switzerland.
Abesifazane kulolu cwaningo, abacwaningi bathola, ngokuvamile, lapho wavela khona imali kubakaki aphansi, ayemaningi amathuba okuba banesifo sikashukela, umfutho wegazi ophezulu kanye umlando womndeni yesifo senhliziyo.
Kwakumelwe futhi babekezelele amazinga makhulu kakhulu lokukhathazeka nokucindezeleka kunamadoda.
Abacwaningi kuqashelwe ukuthi amadoda wathola ukufinyelela ngokushesha electrocardiograms (ECGs) ukuhlola isigqi inhliziyo futhi fibrinolysis ukuvimbela amahlule ngaphandle abesifazane.
Ukwelashwa kusenesikhathi ezingaba khona zokushaywa inhliziyo kungavimbela noma ubeke umkhawulo ukulimala imisipha yenhliziyo, ngenkathi kulondolozwa ukuphila lomuntu.
Ngokwesilinganiso kwathatha 15 amaminithi kanye 28 amaminithi, ngokulandelana, ngoba amadoda kufanele lunikezwe ECGs noma fibrinolysis kusukela ngesikhathi befika yigumbi lezimo eziphuthumayo.
Ngokungqubuzanayo, kuthathe 21 amaminithi kanye 36 imizuzu kwabesifazane.
Abacwaningi bakhomba amazinga labesifazane ephakeme yokukhathazeka njengoba isizathu esiyinhloko iphutha.
“Iziguli ukukhathazeka ngubani ukwethula emnyangweni eziphuthumayo non-inhliziyo ubuhlungu besifuba avame ukuba abesifazane, nokudlanga sibi syndrome senhliziyo ingaphansi phakathi kwabesifazane abasha kuka phakathi izinsizwa,” wathi wocwaningo uLouise Pilote.
“Okwatholakala kusikisela ukuthi yokusiza abalimele izisebenzi angase ekuqaleni uchithe umcimbi inhliziyo phakathi kwabesifazane abasha nokukhathazeka, okuyinto yayiyobangela eside yendlu ECG isikhawu.”
Okutholakele yashicilelwa umagazini wamuva we-Canadian Medical Association Journal.
23263	2 Sibi syndrome senhliziyo, Canada, Canadian Medical Association Journal, Electrocardiography, waseMcGill University, Montreal, isilethikusebenza, I-united states
← ECrimea usho wokuzikhulula ekubuseni Ukraine Japan Khombisa amasheya eziphonsa ku Tokyo okokuqala →